Maadeey ma Maqasheen! – Rasaasa News
Oct 21, 2009 Abtidoon, ethiopia, Jwxo-shiilada
Ragu waa labo, nin soo socod naageed leh oo sii socod nimeed leh iyo nin soo socod nimeed leh oo sii socod naageed leh. Nin soo socod nimeed leh oo sii socod naageed leh: waa nin laf iyo Itaal Eebe weyne siiyey oo kolka uu kugu soo socdo aad bisinka hoosta ka qabsan adiga oo leh tolow maxaad kala mudan doontaan, kolka uu ku soo gaadho ee aad wada hadashaan ayaad ogaan in uu yahay niiqniiqle ayna maradiisa ninimo ku jirin, kaasi wuxuu lee yahay sii socod naageed. Nin soo socod naageed leh oo sii socod nimeed leh, waa nin laf yari iyo Itaal daro Eebe weyne ku mutaystay, kaasi kolka uu kugu soo socdo niyadaada walwal wax walwal ah ma galayo, laakiin kolka uu ku soo gaadho ee aad wada hadashaan ayaad ogaan in uu yahay cod kar aan aan agtiisa la mari karin, kaasi waxaa uu lee yahay sii socdo nimeed.
Abtidoon oo kolka aad maqasho naanaystiisa ah “maadey” waxaad is odhan waa nin karmeed ayna agtiisa oolin wax caajis ah dadkana u maadeeya oo ka qosliya, waa nin madow oo xoog badan walow la yidhi wuu bararay afkuna wuu cadaaday, koley anigu waxaan soo dhigtay in uu yahay nin aan hadal loo gabin karin. Waxaanse quustaa kolka uu ideecadaha ka hadlaayo isaga oo sheeganaya hogaanka arimaha dibada ee kooxda Jwxo-shiil ahna nin reer Ogadeeniya ah, walaahi waan yaxyaxaa. Sowkii caaqilka reer baare ee reer Qalaafe yidhi “af ama Ogadeen ha ku hadlo ama geel caws ha ku cuno”.
Hadal xumida waxaa iiga daran surmo seegtada hadalka, waxaa uu yidhi “Itobiya way naqiimaysay mar hadayd tidhi hub badan baan ka qabanay ONLF, saa waxbaba ma haysano”. Waxaan xasuustay codkii daryaanka weynaa ee Dr. Dolal oo kolka ay ideecaduhu waraysanayaan ay wariyeyaashu jeclaan jireen in ay codka ka xafidaan, oo aan is lee yahay Jwxo oo dhan iyo kaligii baa isu dhigmayey.
Maadey intii aanan ideecada ka dhagaysan ayaan akhriyey bogga Qorhey.com oo ay Qaaxo iyo Roda Afjano wax ku qoraan, saa waxaa ku yaalay bayaan ay kooxda Qaaxo soo saartay oo leh “ninka baxsaday wuxuu ahaa nin yar oo waa dhaw ku soo biiray Jabhada”. Galabnimadii ayaan ideecada VOA, waxaan ka dhagaystay Maadey oo aad moodo kolka uu hadlayo in ay qadhadhyo hayso, waxaana uu beeniyey wixii hore bayaanka loogu soo saaray isaga oo leh waxaan la hadlay gudihii “mana jiro nin magacaas wata oo ka tirsanaan jiray ONLF, garabkeena”.
Waxaan ogaaday in ay run tahay xantii la sheeg sheegayey ee ahayd in kooxdii Jwxo-shiil ay dhawr garab noqotay, waayo qaaxo waxaa uu soo saaray bayaan ku qoran afka Somaliga, kana gadisan codka Maadeey, waxaa kale oo aan arkay qoraal aan wax calaamad ah lahayn oo af Ingriis ku qoran oo aan ahay qoraalkii Hanad Maalin Guur.
Kooxda Jwxo-shiil ee halgan dumiska “khaatumo xun”, waxaa Meherad la mooday af ku dirirnimo iyo ana wayka, boggaga beenta ee aan dhaafsiisnayn gudaha dalalka reer galbeedka, waxay ummada Somalida Ogadeeniya ku hayaan hanqaar ay xusuusinayaan sidii la ahaa.
Waxaanu leenahay xishooda halgankii waa kii aad hoga ku rideen, ee aad xabada la dhacdeen N/hurayaasha qaaliga ah, horena u diideen in la wada tashado, way u muuqataa dadweynaha Somalida Ogadeeniya waxa jira oo dhan.